YACReader muchinjikwa-chikuva chakavhurika sosi comic kuverenga | Linux Vakapindwa muropa
YACReader muchinjikwa-chikuva chakavhurika sosi comic kuverenga
YACReader ndeye multiplatform comic bhuku muverengi , que inotsigira akawanda comic mafaera (CBZ, CBR, ZIP, TAR, RAR uye ARJ) uye mafomati emifananidzo (JPEG, GIF, PNG, TIFF uye BMP).
Iyo interface inovabvumidza kuti vatarise chete pakuverenga, kwete kutsauswa nezvimwe zvinhu, uye panguva imwe chete inosanganisira huwandu hwenzvimbo dzinonakidza.
1 Nezve YACReader
2 Maitiro ekuisa YACReader paLinux?
About Wiki YACReader
Muverengi uyu anotipa raibhurari iyo inotibvumidza kutarisa comic yemabhuku eunganidzwa aine matatu akasiyana animated shanduko mhedzisiro.
YACReader unogona kuisa zvakakosha mabasa ekushandisa nekudzvanya kurudyi pane inoratidzwa nhoroondo, komiki kana nekusarudza bhatani rinodiwa pabara rekushandisa.
Unogona kuvhura mafaera nekukwevera iwo muhwindo rekushandisa kana kushandisa makiyi ekuwana pane bharanzi.
Kuwedzera kune izvi iko kunyorera kunotibvumidza kuisa girazi rinokudza kuti tione ruzivo, chinja kuzere skrini uye kushandisa hotkeys kuti utonge zvirinani pane zvese maitiro.
Iva nemukana wekugadzira mabhukumaki, kuenda kune inotevera kana comic yenyaya, kuti ukwanise kutenderedza mufananidzo kune akasiyana maakisi, kusvetukira kune yakapfuura kana inotevera peji rinotariswa.
Chirongwa inopa yakavakirwa-mukati duramazwi rutsigiro iyo inobvumidza iwe kushandura mazwi pakati pemitauro yakawanda.
Uyewo ine zvimwe zvekugadzirisa sarudzo iyo inokutendera iwe kusarudza iyo yekuratidzira modhiyo, chengetedza iyo razvino peji muJPG fomati, uye chinja iyo gamma kukosha, kupenya uye musiyano wemufananidzo.
Todo mhando yekubatanidza e-comics inogona kutorwa pamhepo uye kuvhurwa kubva kubhurawuza muYACReader. Pamusoro peizvi, chirongwa ichi chinosanganisira rondedzero izere yezvidimbu zve keyboard, pamwe nesarudzo dzinobatsira dzinogona kugadzira maforodha emafaira uye kugadzirisa shanduko mhedzisiro kuburikidza nebarbar.
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti iyo yakakosha kana yakasarudzika ficha yekushandisa ndeye yayo mbiri maonero maitiro kuratidza mapeji maviri panguva, padivi nepadivi, kungofanana neyekunyora mapepa.
Pindai akakosha maficha eYACReader atinogona kuwana, anotevera:
Tsigiro yemafaira akawanda emifananidzo
Tsigiro yemafomati-emhando mafomati
Yakazara skrini uye windowsed mode
upamhi uye kukwirira kugadzirisa modes
muti uye rondedzero maonero ekukurumidza kufamba pakati pemakomiki
Sarudzo dzekuvandudza kudzima kana kutumidza mazita akawanda enyambo mabhuku kuunganidzwa
Mhedzisiro yemifananidzo mhedzisiro
Maitiro ekuisa YACReader paLinux?
Kana iwe uchida kuisa ichi chishandiso pane yako system, iwe unofanirwa kuteedzera rairo dzatinogovana pazasi zvinoenderana neLinux kugovera iwe yauri kushandisa.
Avo avo ndivo vashandisi veArch Linux, Manjaro, Antergos kana chero kugoverwa kwakatorwa kubva kuArch Linux, unogona kuisa ichi chishandiso kubva kuAUR repositories.
Chete ivo vanofanirwa kuve neiyo AUR wizard yakaiswa, unogona kubvunza chinyorwa chinotevera uko kuvadya ivo vamwe.
Isu tinovhura terminal uye mairi isu tinoita inotevera mirairo:
aurman -S yacreader-nopdf
Zvino kune avo vaverengi avo vari vashandisi veDebian, ivo vanofanirwa kuwedzera inotevera repositi kune system kuitira kuisa chishandiso.
sudo echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/selmf/Debian_9.0/ /' > /etc/apt/sources.list.d/home:selmf.list
wget -nv <a href="https://download.opensuse.org/repositories/home:selmf/Debian_9.0/Release.key%20-O%20Release.key">https://download.opensuse.org/repositories/home:selmf/Debian_9.0/Release.key -O Release.key</a>
sudo apt-get install yacreader
Nguva Kune avo vari vashandisi veUbuntu uye zvakatorwa zvakagoverwa, ivo vanofanirwa kuwedzera inotevera dura.
sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/selmf/xUbuntu_18.04/ /' > /etc/apt/sources.list.d/home:selmf.list"
wget -nv https://download.opensuse.org/repositories/home:selmf/xUbuntu_18.04/Release.key -O Release.key
Para Ivo avo vakagadza Fedora kana zvakatorwa kugovera vanofanirwa kuwedzera inotevera repositi yekuisa:
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.opensuse.org/repositories/home:selmf:yacreader-rpm/Fedora_28/home:selmf:yacreader-rpm.repo
sudo dnf install yacreader
Pakupedzisira, kune avo Ivo vanovhuraSUSE vashandisi, isu tinovhura terminal uye tigoita mariri zvinotevera:
Kana vari vashandisi veTumbleweed
sudo zypper addrepo https://download.opensuse.org/repositories/home:selmf:yacreader-rpm/openSUSE_Tumbleweed/home:selmf:yacreader-rpm.repo
Para avo vanoshandisa openSUSE Leap 42.3:
sudo zypper addrepo https://download.opensuse.org/repositories/home:selmf:yacreader-rpm/openSUSE_Leap_42.3/home:selmf:yacreader-rpm.repo
Para avo vanovhuraSUSE Leap 15.0 vashandisi:
sudo zypper addrepo https://download.opensuse.org/repositories/home:selmf:yacreader-rpm/openSUSE_Leap_15.0/home:selmf:yacreader-rpm.repo
Ya akawedzera repository ingo nyora zvinotevera kuisa:
sudo zypper install yacreader
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » YACReader muchinjikwa-chikuva chakavhurika sosi comic kuverenga
Inokurumidza kupfuura MComix kurodha iwo iwo comic, asi iyo yezasi peji kuyerera haina kugadzikana, pane chero munhu anoziva kana ichigona kuitwa yakatwasuka uye inoonekwa seyemomix?
Iyo Librem 5 ichataridzika yakanaka neGNOME 3.30 inovimbisa Purism